Iyo nyowani HomePod software ichagadziridzwa yakananga kubva kuImba | IPhone nhau
Iyo HomePod iri kuswedera padyo uye padhuze, kuchengetedza kwakatowanikwa uye zvinongosara kuti mudziyo utange kusvika kune varidzi vawo vatsva, uye chii chakanyanya kukosha: kuti munyika dzakaita seSpain tinogona kuzviedza. Uye ndezvekuti kunyangwe kuchengeta Vanowanikwa, Ivo vari chete munyika senge United States, United Kingdom, uye Australia, Anglo-Saxon nyika saka HomePod yazvino yaizongowanikwa chete mumutauro weShakespeare.
Zvisinei, tinogona kuramba takamirira… Ichasvika zvirokwazvo mune dzimwe nyika mumwedzi iri kuuya, uye ikozvino izvo zvinonyanya kutifadza ndiyo mikana yese yazvinotiunzira. Ziva kuti zvinonzwika sei, ndeapi mikana chaiyo iyo Siri ichatipa paPambaPod, uye ese aya ma freaks nezve mashandiro ayo atinoda zvakanyanya. Nhasi tinowana imwe yeaya ramangwana maficha eiyo Nyowani Pod, imwe inokodzera zvizere mu kuti iyi PodPod nyowani ichagadzwa sei. Uye, kana Apple ichifarira kuipa mikana mitsva, izvo zvinoreva kuti inogadziridza software. Ko iyo HomePod nyowani ichagadziriswa sei? Mushure mekusvetuka tinokupa zvese zvese, uye ini ndave kutofungidzira kuti wajaira nzira iyi nyowani ...
Uye ini ndinokuudza chero bedzi iwe uine Apple Watch, sezvo iyo HomePod yekugadzirisa ichaitwa nenzira yakafanana. Kana kugadzirisa iyo Apple Watch isu tinofanirwa kuenda kune yayo yega app, iine HomePod, sechigadzirwa chakanaka chemba yedu, isu tichafanirwa kuenda kuImba app, iyo inodzora nzvimbo yezvinhu zvese zvine hungwaru zvishandiso zvatinazvo zvemumba medu, uye nekudaro, zvePambaPod
Ichave iyo app yeImba iyo ichatizivisa isu kuti pane nyowani yekuvandudza yeiyo HomePod, hapana chikonzero cheimwe nyowani yekuwedzera kuApp app. Tichavawo nemukana we seta otomatiki inogadziridza saka ndiyo iyo HomePod pachayo iyo inogadziridzwa nekukurumidza kana paine mutsva nyowani. Nhau diki dzinotiunzira padhuze neiyo nyowani Apple chishandiso. Zvishoma zvasara…
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo nyowani HomePod software ichagadzirisa zvakananga kubva kuImba app
Iyo gehena ndinotaura kwaari nechirungu, chii chiri kunetsa Apple, hausi kana kuitengesa sekufunga kwako, kuiisa kune dzimwe nyika, iwe shit nekuti ndicha piyare kuUSA